ဝတ္ထုတို | THANGNO
by Thang No
ထိုစဉ် ကူဘိုတာအင်ဂျင် စက်နှင့် Fly Wheel သည် အင်ဂျင်မှ ရုတ်တရက် ပြုတ်ထွက်လာ၏။ ပြီး တော့ အရှိန်နှင့် လွင့်ပျံလာသော Fly Wheel ကြီးက ကိုဂျင်မီ၏ … ကိုယ် တခြမ်းကို ပွတ်တိုက်သွားသည်။ ကို ဂျင်မီလက်မှ ငှက်ကြီးတောင် ဓားသည် ကျွန်တော့ခြေရင်းသို့..““ ဒေါက်”” ကနည်းပြုတ်ကျလာသည်။ ကိုဂျင်မီ လည်း ကျွန်တော့ခြေရင်းမှာ ခွေခွေ လေးကျလာသည်။ ကျွန်တော် နှုတ်မှ လွှတ်ကနည်း ““ ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ Fly Wheel ကြီးရယ် အဲ အဲ … ဘုရားသခင်ရယ် ”” ကျမ်းစာတပိုဒ်က ချက်ခြင်း ခေါင်းထဲဝင်လာသည်.. သူတို့ရထားအသွား ခက် စေခြင်းငှာ ရထားဘီးများကို ချို့တဲ့ စေတော်မူ၏ …
Continue reading “လရိပ်မခြွေမီစောစောကြွေပေါ့နှင်း – ၃”
လရိပ်မခြွေမီ စောစောကြွေပေါ့နှင့် – ၁
မက်ဆိုပိုတေးမီးယားဒေသ။ ခြောက်သွေ့ပူပြင်းတဲ့ ကန်္တာရရပ်ဝန်းကြီး တစ်ခုပေါ့။ အဲဒီအပူပိုင်းဇုန်တနံတလျားမှာ.. ဣသရေလ လူမျိုးတော်ကြီးတွေ သွားလာလှုပ်ရှားရုန်းကန်ရင်း ဘ၀ကို တည်ဆောက်နေကြတာပါ။ ပူပြင်းခြောက်သွေ့တဲ့ရပ်ဝှမ်းဒေသမှာနေတဲ့ ဣသရေလတွေရဲ့ အတမ်းတဆုံးအမြတ်နိုးဆုံးဆိုတာဘာ လဲသိလား…။ နှင်းပေါ့…နှင်း။ အေးမြတဲ့နှင်း…၊ နှလုံးသားထဲထိတိုင်နက်ရှိုင်းစွာ အေးမြစေတဲ့နှင်း….။ ဒါကြောင့် အဘဘုရားသခင်က နှင်းကိုတမ်းတ တဲ့ဣသရေလတွေအတွက်… ငါသည် နှင်းကဲ့သို့ ဣသရေလပေါ်မှာ တည်နေ မည်။ သူသည် နှင်းပွင့်ကဲ့သို့ပွင့်လိမ့်မည်။ ။ ၁ ။ နှင်း…..၊ လောကကိုအေးမြစေသောနှင်း…. သောကကို ချမ်းမြစေသောနှင်း… နှင်းကိုလူသားတိုင်းချစ်ပါသည်။ ချစ်သူတိုင်း နှင်းကို ခံစားပါသည်။ လူ့သမိုင်းမှာ ““နှင်း””ကို မော်ကွန်း ထိုးကမ္ဗည်းမှတ်တမ်းတင်လျက်ရှိပါ၏။ ထိုနှင်းကဲ့သို့ အေးမြ၍တမ်းတဖွယ်… အကြင်နာရိပ် နှင်းတစ်ပွင့်နှင့်ဆုံဆည်းမိသော ကျွန်တော် ၏ ဘ၀ကန္တာရလေးအတွင်း၌……. ။ ၂ ။ ကျွန်တော် …
Continue reading “လရိပ်မခြွေမီ စောစောကြွေပေါ့နှင့် – ၁”
လရိပ်မချွေမီ စောစောကြွေပေါ့ နှင်း (ပြီးခဲ့သည့်ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းချုပ်) အောင်သည်ဓမ္မတက်္ကသိုလ်တွင်တက်ရောက်နေရင်း ဓမ်္မသီချင်းများကို ရေးဖွဲ့သီကုံးလေ သည်။ အောင်၏ဓမ်္မတေးများသည် အသင်းတော်များ တွင်နေရာယူလာသည်။ မိဘမဲ့ဖြစ်သော အောင်သည် ကျောင်းစားရိတ်အတွက်အခက်အခဲများရှိသည်။ သို့သော်၊ ဘုရားကိုချစ်သောအောင် အတွက် အေးမြနှင်းဆိုသောမိန်းကလေးတစ်ဦးက ဆရာစောတင်နရီမှ တစ်ဆင့်အောင်၏ ကျောင်းစားရိတ်များကို ပံ့ပိုးခဲ့သည်။ အေးမြနှင်းသည် အောင်၏ဓမ်္မတေး ပရိတ်သတ်တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ နောက်တော့ အောင်နှင့် အေးမြနှင်း တို့ သူမ၏ စံအိမ်ကြီးဝယ် ဆုံဖြစ်မိရာမှ၊တစ်ယောက် နှင့်တစ်ယောက်သံယောဇဉ်ဖြစ်ကြသည်။ အေးမြနှင်းတွင် သင်းမြနှင်းဆိုသောအမွှာညီမတစ်ဦး အမေရိက တွင်ရှိသည်။ သင်းမြနှင်းကလည်း အမေရိကတွင်ချစ်သူရှိသည်ဟုကြားရသည်။ အောင် ဓမ်္မတက်္ကသိုလ်တွင်ကျောင်းပြီးသွားတော့၊ နယ်ရှိအသင်းတော်တစ်ပါးတွင် အစေခံ ရသည်။ ထိုအသင်းတော်၏အဆောက်အဦးမှာ ဟောင်းနွမ်းနေပြီဖြစ်ရာ၊ အောင်က ဓမ်္မတေး တစ်ခွေထုတ်၍ ရံပုံငွေရှာပြီး ဘုရားကျောင်းပြင်ရန်ပြင်ဆင်သည်။ အလှူရှင်က နှင်းတို့ညီအစ်မ ဖြစ်သည်။ …
Continue reading “လရိပ်မချွေမီ စောစောကြွေပေါ့ နှင်း (ဇာတ်သိမ်း)”
အ ကြင် နာ ည လ က သာ ဆဲ
”ခုနှစ်နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်ဟာ မောင်ကြီးအတွက်တော့ နည်းတောင်နည်းပါသေးတယ် နှမငယ်။ ကိုယ်မြတ်နိုးစွာချစ်ရတဲ့ချစ်သူကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရဖို့ ခုနှစ်နှစ်ကျွန်ခံရတာမောင်ကြီး အတွက်တော့ ဘာမှမပြောပလောက်ပါဘူး”” ကြည်လဲ့နေတဲ့ ကောင်းကင်ပြာကြီးကို မြက်ခင်းစိမ်းစိမ်းပေါ် ပက်လက်အိပ်လို့ ကြည့် နေရင်း၊ ရင်ထဲမှာ ကြည်နူးပီတိဖြာနေမိတယ်။ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ မြက်နုစိမ်းစိမ်းလေးတွေကို စားနေတဲ့ သိုးလေးတွေ ဆိတ်လေးတွေ ရဲ့မြင်ကွင်းကလည်း ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့စရာပါပဲ။ နောင်ကြီးရဲ့စိတ်အတွေးတွေကလည်း အဝေးကပျပျလေးလှမ်းမြင်နေတဲ့ တောတောင် စိမ့်စမ်းတွေနဲ့အတူ … အဆုံးမဲ့ပျံ့လွင့်နေလေရဲ့။ ++++++++++++++++++ ””ခုနှစ်နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်ဟာ မောင်ကြီးအတွက်တော့ နည်းတောင်နည်းပါသေးတယ် နှမငယ်။ ကိုယ်မြတ်နိုးစွာချစ်ရတဲ့ချစ်သူကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရဖို့ ခုနှစ်နှစ်ကျွန်ခံရတာမောင်ကြီး အတွက်တော့ ဘာမှမပြောပလောက်ပါဘူး”” ကြည်လဲ့နေတဲ့ ကောင်းကင်ပြာကြီးကို မြက်ခင်းစိမ်းစိမ်းပေါ် ပက်လက်အိပ်လို့ ကြည့် နေရင်း၊ ရင်ထဲမှာ ကြည်နူးပီတိဖြာနေမိတယ်။ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ မြက်နုစိမ်းစိမ်းလေးတွေကို စားနေတဲ့ သိုးလေးတွေ ဆိတ်လေးတွေ ရဲ့မြင်ကွင်းကလည်း ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့စရာပါပဲ။ …
Continue reading “အ ကြင် နာ ည လ က သာ ဆဲ”
(၁) ““အိပ်မက်လေးထဲ …လာမှာလားကွယ်၊ လာနိုင်ပါတယ်၊ ပြန်လည်ထွက်မသွားနဲ့ …ခွင့်မပြုနိုင်ဘူး”” ထူးအိမ်သင်၏သီချင်းဆုံးတဲ့အထိ နားထောင်ပြီး ““ဧကရီထွဋ်”” လှပစွာ ပြုံးပြီး လိုက်ကာကိုချကာ အိပ်ယာထဲ ၀င်လိုက်တော့တယ်။ ခြံပြင်မှလည်း သီချင်းသံတိတ် သွားတယ်။ စကားသံပဲ ကြားရတယ်။ ““ဟေ့ကောင် ၀င်သွားပြီ မရှိတော့ဘူး”” ““အေးကွာ …ကဲ ထတော့ ပြန်ချိန်တန်ပြီ၊ ဆယ့်တစ်နာရီတောင် ကျော်ပြီ”” ““ဟုတ်တယ် …ဆာယာ ဒီလောက်ရင်ဖွင့်တာတော်လောက်ပြီပေါ့”” ဧကရီထွဋ်ကို စွဲလန်းချစ်နေတဲ့ ဆာယာရိပ်သည် သူငယ်ချင်းများနဲ့အတူ ရင်ဖွင့် သီချင်းလာဆိုပြီး မပြန်ချင်ပဲ ပြန်သွားရတယ်။ အလိုက်သိတဲ့ သူငယ်ချင်း အာကာနဲ့ ဖိုးနိုင်က သူ့ကို နားလည်ပေးစွာနဲ့ လိုက်လာပေးခဲ့တယ်။ ဆာယာရိပ်က ဧကရီထွဋ်ကို ဇွဲရှိရှိစောင့် နေခဲ့တယ်။ ၁၀ တန်း ကျောင်းသူဘ၀ကတည်းကပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဧကရီက …
Continue reading “မျှော်လင့်ခဲ့သောနေ့”
အခန်း (၁) ဟိုးအဝေးမှာလာနေတဲ့ပုံရိပ်က နင်နဲ့တူလိုက်တာ။ အိုး ဟုတ်တယ်။ နင်မှနင်အစစ်ပဲ။ ဘုရားကျောင်းရှေ့ရောက်တိုင်း ဒီကွန်ကရစ်လမ်းပေါ်က ကြည့်နေကျအကြည့်က ငါ့ရဲ့အကျင့် တစ်ခုပဲ။ ဂျင်းဘောင်းဘီနဲ့စပို့ရှပ်ကို တစ်ခုံတမင်ဝတ်တတ်တဲ့ကောင်လေးက ဒီလမ်းလျော လေးကနေ ဘုရားကျောင်းလာတက်လေ့ရှိတာကိုး။ အဲဒီကောင်လေးက ငါ့ချစ်သူ နင်ပဲပေါ့။ ဒါပေမယ့် …။ နင် ငါ့အနားကနေ ရှောင်ပုန်းနေခဲ့တာကြာလှပြီ။ အိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ငါကစ ရှောင်ခဲ့တာပါ။ နင်ကစတာ မဟုတ်ဘူး။ နင် ငါ့ကို စာနာပြီးရှောင်ခဲ့တာပဲ။ ခုဆို (၃) နှစ်ခွဲတောင် ရှိခဲ့ပြီ။ ငါအကြည့်မမှားပါဘူး။ နင်ပုံရိပ်က ငါ့ရင်ဘတ်ထဲမှာ တစ်ခုတည်းသာဖြစ်တည်ခွင့်ရှိနေခဲ့တာပါ။ ဒါဆို …နင် …။ဂျင်းဘောင်းဘီဘေးအိတ်နှစ်ဖက် လက်ထိုးပြီး မျက်နှာကိုအနည်းငယ်မော့ လမ်းလျှောက်တတ်တဲ့ နင့်ပုံကိုငါဘယ်မေ့မှာလဲ။ နင့်ဆံပင်က ဆံလုံးကြီးပြီး ပျော့ပျော့လေ။ ခြေဆောင့်လျောက်တဲ့အကျင့်ကြောင့် ဆံပင်တွေကခါနေတတ်တယ်။ ကရင်သွေးမို့ …
Continue reading “အဆုံးမဲ့ အလွမ်းတို့ လွင့်ပါးပါမှ”